Nagu saabsan - Mestech Industrial Limited
Wax soo saaraha caaryada iyo bixiyaha xalka, Shiinaha
Tan iyo aasaaskeedii, Mestech waxaa ka go'an inay macaamiisha siiso wax soo saar iyo adeegyo hufan oo tayo sare leh. Waxaan haynaa koox xirfadlayaal ah oo injineero ah, mashiinno si fiican u qalabaysan iyo nidaam maamul oo hufan. Waxaan si joogto ah u adeegsannaa tikniyoolajiyad cusub iyo hababka maaraynta si aan ugu soo ururinno waayo-aragnimo wax soo saarka caaryada caagga ah, soo saarista cirbadeynta, birta loo dhinto, qaabeynta wax soo saarka iyo isku imaatinka wax soo saarka si loo daboolo baahida macaamiisha. Awoodda hogaaminta, waxay inta badan ka muuqataa dhinacyada soo socda:
Injineeradayagu waxay khibrad hodan ah u leeyihiin qaabeynta iyo habka wax soo saarka ee qaybaha balaastigga, qeybaha birta iyo wasakhahaasi. Waxay adeegsadaan softiweer si ay u qaabeeyaan wasakhda iyo alaabada. Waxay awoodaan inay siiyaan macaamiisha qaabeynta sheyga, falanqaynta suurtagalnimada, qiimeynta halista iyo xalka.
Injineerada Mestech waxay si xirfad leh u isticmaali karaan UG, PROE, Moldflow iyo barnaamijyo kale oo loogu talagalay naqshadeynta caaryada iyo falanqaynta. Qaababka aan u sameyno qaybaha gawaarida, qaybaha qalabka caafimaadka, qaybaha wax soo saarka elektarooniga ah, qalabka guryaha, korantada warshadaha, ilaalinta deegaanka iyo baahiyaha maalinlaha ah. Waxaan awood u leenahay inaan naqshadeynno oo soo saarno HASCO iyo DEM caaryada heerka caadiga ah iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha macaamiisha ah, oo aan u dhoofinno dalal kale iyo gobollo.
Injineerada Mestech waxay la shaqeyn karaan macaamiisha si ay u bixiyaan nashqadeynta qeyb balaastig ah iyo nashqadeynta qeybta birta ah ee alaabada elektarooniga ah iyo wax soo saarka korantada, waxayna sameeyaan falanqeyn suurtagal ah, ka wada hadlaan kana helaan dhibaatooyinka oo ay siiyaan talooyinka hagaajinta, iyo sidoo kale naqshadeynta caaryada iyo soosaarida marxaladaha soo socda.
Waxaan haynaa koox injineernimo, waxay sameeyaan nashqadaynta iyo naqshadeynta caaryada iyo la socoshada mashruuca. Haddii aad gacantaada ku haysato mashruuc cusub oo u baahan in la horumariyo wasakhda caagga ah iyo qaybaha la isku duro ee la isku duro, fadlan la xiriir kooxdayada farsamada, waxaan dib u eegi doonnaa xogtaada oo waxaan kuu soo diri doonnaa talo soo jeedin ah si loo hagaajiyo qaabkaaga qayb, tani waxay hubin doontaa in mashruucaagu noqon doono guuleysta inta lagu gudajiro wax soo saarka caaryada iyo keydinta waqti badan oo sameynta caaryada.
Warshaddeena iyo qalabkeena
Caaryada iyo wax ka sameynta cirbadeynta iyo sidoo kale tuurista birta ayaa aad ugu tiirsan heerka qalabka.
Aqoon isweydaarsiga caaryada, marka lagu daro injineerada naqshadeynta xirfadleyda, injineerada howsha iyo sayidyada caaryada, shirkadeenu waxay si firfircoon ula socotaa tikniyoolajiyadda casriga ah ee hadda socota, oo ay ku qalabeysan yihiin aaladaha mashiinka CNC ee horumarsan, mashiinnada laydhka dhimirka ee EDM, qalabka mashiinka siligga lagu gooyo. Xawaaraha farsamaynta ee qalabka mashiinka xawaaraha sare leh ee CNC wuxuu gaari karaa 24000rpm.
Noocyada guud ee caaryada ka sokow, waxaan sidoo kale sameynaa caaryada labada midab leh, waxaan sameysanay caaryada biirka ah iyo gelinta caaryada, muuqaalka caaryada, waxaanna ka sameysannaa caaryo balaaran 3 mitir gudahood.
Marka laga hadlayo cirbadeynta cirbadeynta, waxaan leenahay mashiinno wax lagu duubo oo ka yimaada 100 tan ilaa 2000 tan, mashiinno wax lagu duubo oo midab leh oo laba-midab leh iyo mashiinno wax lagu duro oo xawaare sare leh. Marka lagu daro cirbadeynta cirbadaha qaybaha balaastigga ah ee cabirka guud, waxaan soo saari karnaa qaybo labo midab leh, qaybo dhuuban oo dhuuban iyo qaybo baaxad weyn leh. Qaybaha mideysan waxay dherer ahaan noqon karaan ilaa 1.5 mitir, dhumucda qaybta ugu dhuuban waxay noqon kartaa 0.50 mm
Waxaan haynaa 32 mashiinno cirbad ah oo xoogagga isku hayaa ay u dhexeeyaan 90T ~ 2000T, mashiin laba-irbad leh, oo ay la socdaan 50 ~ 60 shaqaale. Awood wax soo saar 1.5 milyan oo qaybood bishii.
Aqoon isweydaarsiga dhinta
In berrinkii la xirrira biraha, waxaan ku siin karaan wax soo saarka shubay dhinta ee daawaha zinc iyo daawaha aluminium, iyo sidoo kale machining sax ah ee qaybo ka mid biraha. (fadlan tixraac bogga "Dareemida biraha dhinta" iyo "Mashiinka CNC" wixii faahfaahin ah.)
Maareyn wax soo saar hufan
Waxaan ku soo bandhigeynaa maareynta mashruuca iyo nidaamka ERP ee habka wax soo saarka iyo wax soo saarka. Iyadoo la raacayo shuruudaha macaamiisha, waxaan u sameynaa qorshe waqti oo aan ku hagaajineynaa habka laga bilaabo naqshadeynta, soo iibsiga alaabada illaa farsamaynta, wax soo saarka, kormeerka iyo shixnadaha, si loo gaabiyo muddada dhismaha loona yareeyo kharashka caaryadaada iyo wax soo saarkaaga.
Tayada waa sifo muhiim ah si loo hubiyo shaqada alaabta. Waxaan dejinay nidaam tayo leh oo qumman iyo qaabeyn qaabsocod tayo leh iyo heerar si loo hubiyo in badeecooyinka la soo saaray ay buuxiyaan shuruudaha macaamiisha, iyo in la hubiyo in wax soo saarka alaabada aqoonta u leh macaamiisha. Ku dar
Marxaladda wax soo saarka caaryada, waxaan si firfircoon u hubineynay tayada tan iyo qaabeynta caaryada
1. Falanqaynta macluumaadka ee shuruudaha macaamiisha
2. Dib-u-eegista suurtagalnimada naqshadaynta caaryada
3. Naqshadeynta tijaabada caaryada
4. Qaabaynta xaqiijinta naqshada ugu dambeysa
5. Kormeerka soo socda ee biraha caaryada ah
6. Qiyaasta cabbirka cabbirka cabbirka
7. Cabirka cabbirka cabbirka korantada
8. Tijaabada iyo qiimeynta caaryada
9. Qiimaynta soosaarka tijaabada
Marxaladda wax soo saarka
1. Xaqiijinta qaybaha aqoonta u leh iyo shaybaarada wax soo saarka
2. Wax soosaar balaaran maqaalka koowaad maqaalka
3. Kormeerka wax soo saarka
4. Kormeer buuxa iyo hubinta badeecada rarka
5. Raadinta tayada
Waxaan haynaa kooxda QC, iyo qalabka baaritaanka & cabirka: 3D Mashiinka Cabirka Isuduwaha iyo tijaabiyaha midabka.
Kooxdayada xirfadeed ee dhoofinta dhoofinta
Mestech waxay lashaqeysaa la-hawlgalayaasha dalal badan sanado badan, waxaan usameynaa caaryado kaladuwan oo kala duwan iyo alaab iyaga loogu talagalay, iyo waliba adeeg hal-joogsi ah Waxaan aragnay koox xirfadlayaal ganacsi oo ajnabi ah. Waxay yaqaanaan tiknoolajiyada wax soosaarka waxayna kula hadli karaan Ingiriisiga qaabeynta, habka, ganacsiga iyo arrimaha xamuulka. Waxay si fiican u fahmi karaan shuruudahaaga waxayna ku siin karaan badeecooyin iyo adeegyo waqtigooda ku habboon.